Deg Deg: Al shabaab oo Toogasho ku dilay Sarkaal iyaga ka tirsanaa kuna Qabiil ahaa MD Farmaajo… | Allbanaadirtimes.com – Somali News Update
Deg Deg: Al shabaab oo Toogasho ku dilay Sarkaal iyaga ka tirsanaa kuna Qabiil ahaa MD Farmaajo…
May 13, 2017 - Aragtiyood
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil Al-shabaab ay u geysteen mid kamid ah askarta ilaalada u ahaa sarkaal Al-shabaab ka tirsan oo ku sugnaa deegaanka Ceel-cadde.
Wararka qaar ee kasoo baxa gobolka Gedo ayaa sheegaya in sarkaalkaasi loo dilay kadib markii sida la sheegay uu taleefoonka kula hadlay masuuliyiin dowladda ka tirsan, gaar ahaan madaxda dalka ugu sareyso.
Cali Cabdulaahi Shire oo kamid ahaa saraakiisha Al-shabaab ayaa lagu toogtay deegaanka Ceel-cadde oo qiyaas ahaan 60Km u jira degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo, kadib markii uu taleefoonka kula hadlay xubno u dhow madaxweynaha dalka.
Ka sokow dilka sarkaalka waxaa maalmihii ugu dambeeyay la sheegay in deegaanka Ceel-cadde ay ka taagneyd xiisad u dhaxeysay Al-shabaab dhexdooda oo ku aadan in sarkaal uu wada qorshe ku aadan inay dhanka dowladda isku dhiibaan.
Wararka kale ayaa sheegaya in Cali Shire oo Al-shabaab ay toogteen ay isku heyb ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya uuna waday qorshe dhalinyarada beeshaasi ah inay isaga baxaan Al-shabaab.
Al-shabaab waxay dilka kadib ay hubka ka dhigeen dhamaan saraakiishii kale ee ku heybta aheyd Cali Shire.